Mety hanana olana Web 2.0 ianao rehefa ... | Martech Zone
Alakamisy Janoary 3, 2008 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Rehefa avy nihaona tamin'ny mpidoroka tambajotra sosialy vaovao, Dr. Thomas Ho, Nanintona ny iray tamin'ireo serivisy nampiasainy aho, Profilactic.com.
Ny horonantsary etsy ambony (tsindrio ny to the post) dia widget izay namboariko tamin'ny alàlan'ny serivisy Profilactic. Ity dia lisitr'ireo tranonkala 2.0 rehetra izay fananako… mety ho hitanao ao amin'ilay noforonina vao About page. Mieritreritra aho fa manana olana!
Raha anisan'ireo tranokala ireo ianao dia aza hadino ny manampy ahy amin'ny lisitry ny namanao! 😉
Tags: fizarana pr
Janoary 3, 2008 amin'ny 9:03 PM
hehe, be dia be ny famoriam-bola azonao tao 🙂 Betsaka loatra ny tranonkala web 2.0 aho fa tsy misy raha oharina amin'ity 😉
Fanontaniana iray, firy amin'ireo tranonkala ireo no tena mavitrika ianao? 😉
Janoary 3, 2008 amin'ny 9:13 PM
Mety ho mavitrika amin'ny ampahatelon'izy ireo aho… ny hafa dia tsindraindray. Indraindray aho tsy mitsidika mandritra ny roa volana – fa mijanona ao amin'ilay tranokala mandritra ny ora maro.
Rehefa nozohina? Be loatra ny fotoana!